Tamin'ny taona 2009, raha sahy nandefa tetikasa goavambe i Google izay mifantoka amin'ny tontolon'ny telefaona hampiasaina, serivisy ahafahan'ireo mpampiasa azy mitazona io isa (telefaona) io ihany amin'ny alàlan'ny fitaovana ampiasain'izy ireo, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Nantsoin'izy ireo hoe: Google Voice.
Serivisy izay tsy dia malaza eto amin'ity ranomasina ity, fa ampiasaina matetika matetika any Etazonia izy io. Ankehitriny dia manavao azy ireo izy ireo, ary manavao azy ireo amin'ny zava-baovao hafa mahaliana toa ny famolavolana ny endriny, eny, tonga koa amin'ny iOS ny endrika ...
Alohan'ny hanohizanao ny lohahevitry ny famolavolana ny Google Voice ho an'ny iOS, dia holazaiko aminao izany izao Google Voice for iOS ihany no azontsika atao amin'ny Etazonia App StoreEny, afaka manao kaonty maimaim-poana foana ianao handefasana ity karazana fampiharana ity amin'ny App Store hafa ankoatry ny mahazatra. Ary izany no antony, satria Google Voice for iOS Io dia hahafahantsika mandefa SMS sy manao antso iraisam-pirenena amin'ny vidin'ny fifaninanana avy any Etazonia, amin'ny alàlan'ny kaonty Google anay.
Google Voice for iOS dia marina famolavolana indray Araka ny lazainay, amin'ity tranga ity dia miaraka a boaty inbox vaovao nampisarahan'izy ireo hafatra an-tsoratra, antso ary hafatra amin'ny mailaka anay. Izany rehetra izany dia misy zava-dehibe sivana spam, veloma amin'ny antso ara-barotra ary ny fanohanan'ny Transcription espaniola amin'ireo hafatra ananantsika ao amin'ny mailaka anay.
Navoaka vao haingana ny fanavaozana ho an'ny Gooigle Voice Android, ao amin'ny Google Play Store, ary raha ny filazan'ny tovolahy avy amin'ny Google, Hanomboka azy io afaka andro vitsivitsy, alakamisy? Ao amin'ny Apple App Store. Fanavaozana lehibe iray izay mahatonga ny Google Voice ho maoderina sy hahatratra ireo fampiharana fandefasan-kafatra lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Google Voice dia nohavaozina amin'ny famolavolana ny rindranasa ao anatin'izany ny iOS